.: ၂၂နှစ်ပြည့် ၈လေးလုံးလူထုအရေးတော်ပုံအထိမ်းအမှတ်လှုပ်ရှားမှု(ကိုရီးယား)
မင်္ဂလာပါ။ BURMA ACTION KOREA မှကြိုဆိုပါတယ်…..
မူလစာမျက်နှာ သတင်း ကိုရီးယားသတင်း အလုပ်သမားရေးရာ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက် ကိုရီးယားစကားပြော
ကိုရီးယားရောက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားသည့် အဖွဲ့အစည်းများသည် ၂၂နှစ်ပြည့်သမိုင်းဝင် ၈လေးလုံး လူထုအရေးတော်ပုံအထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ပြည်တွင်း နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုအတွက် ရံပုံငွေရှာဖွေပွဲ၊ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲနှင့် ဆန္ဒပြပွဲအား ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့သည်။
Posted by burmaactionkorea at 1:21 PM
Labels: ကိုရီးယားသတင်း, သတင်း
မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားမှု ကိုရီးယားသည် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးနှင့် လူ့အခွင့် ရေး အတွက် လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းရှိသည်များကို လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေသည့် ကိုရီးယားနိုင်ငံ အတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပါသည်။
ပိုမို ကောင်းမွန်သော အကြံဥာဏ် ပေးလိုသူများ အနေဖြင့်
burmaaction@yahoo.com သို့ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
အများအကျိုး ၊ ရွက်သယ်ပိုးက ၊ ခနိုးခနဲ့၊ ဆိုကဲ့ ရဲ့ လည်း ၊ မဖဲ့စကောင်း ၊ ကိုယ့်လမ်းကြောင်းကို ၊ စိတ်ကောင်းနှင့်ယှဉ် ၊ ရှေးရှုနှင်လော့။ (ရွှေဟင်္သာဆရာတော်ကြီး)
NLD ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် တုန့် ပြန်သံတွေ (1)
Blog Archive August (2) June (9) April (1) November (5) October (3) September (1) March (6) February (27) January (39) December (37) November (19) October (15)
"ငါက ကချင်၊ ငါက ဗမာ၊ ငါကရှမ်းဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေ အခုထားလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ ငါတို့အားလုံးဟာ ဒီမိုကရေစီလူ့အခွင့်အရေးတွေကို လိုချင်လို့ ရုန်းကန်နေတဲ့ ရဲဘော်တွေဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်မျိုး ထားဖို့ပဲလိုပါတယ်။ အားလုံးဟာ ညီရင်းအကိုလို တစိတ်ထဲ ၊ တသဘောထဲလုပ်ရမယ်။ ဒါမှလည်း ကျမတို့ အောင်မြင်နိုင်မှာပါ။ "
မတရားတဲ့ ကိစ္စကိုလုပ်ဖို့ကြောက်ရမယ်။ မမှန်တဲ့ကိစ္စကို လုပ်ဖို့ကြောက်ရမယ်။ လောကမှာ ကြောက်ဖို့ဆိုတာ ဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်...
မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားရေး လှုပ်ရှားမှု မြှင့်တင်ရေးကော်မတီ(ကိုရီးယား)
မြန်မာ- အင်္ဂလိပ် အဘိဓါန်
နှစ်သက်ရာတစ်ခု... first-11 mrtv3 mmtimes yangontimes ပေါ်ပြူလာမြန်မာ ခေတ်လူငယ် မြန်မာ လျှပ်တစ်ပြက် မန္တလေးအထင်ကရ အင်တာနက်ဂျာနယ် မြန်မာအင်ဂျင်နီယာ all-channel ကြံ့ဖွတ် မြန်မာဓါတ်ပုံ ဧရာဝတီဓါတ်ပုံ the asia collection
နှစ်သက်ရာတစ်ခု... မိုးသောက်ကြယ် အဟာရ ငုရင်ပြင် ပေါ်ပြူလာမြန်မာ ရွှေအမြူတေ နေ့သစ်
နှစ်သက်ရာတစ်ခု... ပန်းစကား myanmarmp3 ညကဗျာ မဉ္စူရီ ရွှေအိမ်မက် ဟန်ထွန်းလွင် burmese classic ခရမ်းပြာအိမ်မက် မြန်မာကမ္ဘာ အဖြူရောင်သံစဉ် မြန်မာစကားဝိုင်း
We Fight We Win. အတုံးအရုံးတွေကြားမှာ ရွတ်ရွတ်ချွံ ချွံခုခံနေတဲ့ ဘလောက်